Imithombo yeendaba / iMithombo yeendaba- Umboniso wezoRhwebo lwaMazwe ngaMazwe eFlorida
Yintoni uMboniso wezoRhwebo lwaMazwe ngaMazwe eFlorida?
Ngo-Oktobha 2020, Enterprise Florida, Inc. (i-EFI) ibhengeze umboniso wokuqala waseFlorida wezoRhwebo lwaMazwe ngaMazwe, umboniso weemveliso eziphambili kunye neenkonzo zokuthumela ngaphandle eFlorida. IFlorida lilizwe lokuqala laseMelika ukuba liququzelele umsitho worhwebo olunje. Umboniso weFlorida Trade Expo uza kuba ngoMatshi 16-18, 2021.
Eli qonga lehlabathi likwi-intanethi liza kudibanisa iinkampani ezincinci neziphakathi zaseFlorida ngokuthe ngqo kubaphulaphuli kushishino lwehlabathi kwiinkampani zangaphandle ezinomdla kwiimveliso nakwiinkonzo zazo.
Ngelixa imibutho yorhwebo yelizwe kunye nehlabathi itshintshele kwimiboniso yorhwebo okoko kwaqala ubhubhane, akukho lizwe lase-US libambe umsitho okhethekileyo oqaqambisa amashishini amancinci kunye neempahla zeshishini.
Umboniso utsala iinkampani nemibutho eyi-180 eFlorida. Enterprise Florida kujolise kubo bonke abangama-5,000 XNUMX abazimaseyo kwihlabathi liphela kwisithuba seentsuku ezintathu. Iindwendwe ziya kubandakanya iiarhente, abasasazi, abathengi, abameli, kunye nabathengisi abathengisa iimveliso ezikumgangatho ophezulu ukuze zisasazwe kwaye zithengiswe eYurophu, eLatin America naseCaribbean, eCanada, eMexico, eAfrika, eAsia naseMbindi Mpuma. Amaqabane axhasa lo msitho aquka iNkonzo yoRhwebo yaseMelika, iiofisi ze-EFI zamanye amazwe kunye nemibutho yorhwebo kunye nemibutho.
Umboniso uza kusebenzisa itekhnoloji yomnyhadala, yomsitho, kubandakanya iholo enkulu yemiboniso enabo bonke ababonisi beFlorida, umcwangcisi oqinisekileyo wokucela iintlanganiso zevidiyo kunye nababonisi; iziko ezintsha; igumbi lokushicilela; Amathuba okunxibelelana, kunye neenkcukacha, ii-webinars ezithile zezihloko ntsasa nganye ukusuka kwi-10: 00 am ET ukuya kwi-11: 30 am ET. Amashishini aya kubandakanya ukuhamba ngenqwelomoya kunye ne-aerospace, isayensi yobomi, itekhnoloji yolwazi, iinkonzo zezezimali nezobuchwephesha, ukuvelisa, kunye namanye amacandelo aphambili kushishino kulo lonke ilizwe laseFlorida.
Ukuba unomdla wokubonisa eFlorida International Expo Expo, nceda unxibelelane floridaexpo@enterpriseflorida.com .
Nguba ni u Enterprise Florida, Inc.?
Enterprise Florida, Inc. (EFI) yintsebenziswano phakathi kukarhulumente namashishini abucala phakathi kweeshishini laseFlorida kunye neenkokheli zikarhulumente kwaye ngumbutho ophambili woqoqosho kuRhulumente wase-Florida. Umsebenzi we-EFI kukwandisa kwaye kwahluka uqoqosho lukarhulumente ngokudala imisebenzi.
I-EFI liziko eliphambili kurhulumente kunye nophuhliso lwentengiso kumazwe angaphandle, ixhasa ngaphezulu kwama-60,000 amashishini athumela impahla ngaphandle eFlorida. Kule minyaka ilishumi idlulileyo, ixabiso lokurhweba ngokuthengisa laseFlorida liphantse laphindaphindeka, lafikelela kwi-153.6 yezigidigidi ngo-2019.
Iinkampani zaseFlorida zisebenza njengabathengisi abaphambili kubathengi kumazwe amaninzi kwihlabathi liphela, bethumela iimpahla ezenziwe kwalapha eFlorida, kwenye indawo eUnited States, okanye kwelinye ilizwe. IFlorida ikwayindlela entle yokuthengisa iinkampani ezingezizo zaseMelika ezithengisa iimpahla zazo kwimarike enkulu yaseMelika.
I-EFI ikwagcina uthungelwano lweeofisi zamanye amazwe ezili-18 ezisebenza ukukhuthaza ukuthunyelwa kwelinye ilizwe eFlorida kunye notyalomali lwangaphandle ngqo eFlorida kwiimarike zazo. Ukutsala ngoqoqosho lwayo olukhulu nolukhulayo, indawo ezinzileyo yeshishini, kunye nabasebenzi bamanye amazwe, utyalomali lwamashishini amatsha avela kwihlabathi liphela agalela eFlorida minyaka le, iyenza ibe yenye yezona ndawo ziphambili e-US ze-FDI.
Iifemu zamanye amazwe zisebenzisa iFlorida ukufikelela kwiimarike ezikhulayo kwiLatin America naseCaribbean, kunye nakwimakethi enkulu yaseMelika.
Ngawaphi amashishini aBonisa kulo mboniso?
Ukufunyanwa kwababonisi balo mboniso kuya kuqhubeka kwiinyanga ezimbalwa ezizayo kodwa siza kuthumela Uluhlu oluhlaziyiweyo lweenkampani ezigcine indawo yazo.
Iinkampani ezivela kula macandelo alandelayo ziya kubonisa:
Ukhuselo noKhuseleko lwasekhaya
Abavelisi abanjengeeMpahla zabaThengi, iMpilo kunye noBuhle, iiMveliso zokutya, izixhobo zeMizi-mveliso kunye neziXhobo, kunye nezinye ezininzi
Ixabisa malini iinkampani zaseFlorida ukubonisa?
Iindleko zobhaliso yi- $ 1,060 kwaye i-EFI ibonelela ngezibonelelo zokubonisa ezorhwebo ngokubuyiselwa kweenkampani ezifanelekileyo ukugubungela iindleko zobhaliso.
Ixabisa malini iindwendwe zokuzimasa umboniso wezoRhwebo?
Ubhaliso lusimahla kubantu abazimase umsitho.
Ngaba ungacinezela ukuya kwimiboniso yorhwebo?
Ewe, ukuya kulo mboniso simahla kumajelo eendaba.
Ngaba ndingacwangcisela udliwanondlebe kunye nababonisi kunye / okanye nabasebenzi be-EFI?
Ewe, siza kwabelana ngeshedyuli yababonisi kunye nabasebenzi be-EFI abazakufumaneka ukuba bathethe noonondaba kwiiveki ezikhokelela kulo mboniso.
Ubhaliso luvulelekile kumboniso wamazwe aphesheya waseFlorida
IFlorida iququzelela uMboniso woRhwebo lwaMazwe ngaMazwe okuqala
Enterprise Florida Yandisa ukuNcedisa ukuThelekisa amaShishini ngokuBonakalayo ukuze ubandakanye iCanada neMexico
Enterprise Florida kwiiGranti zaMabhaso kwiMiboniso yoRhwebo yaMazwe ngaMazwe
Enterprise Florida kwiNkxaso-mali yeBhaso lokuDibanisa iMashishini
BRian Mimbs | Ifowuni: 1+ 850-294-0083 | Imeyile: media@enterpriseflorida.com